မြွေထက် အဆိပ်ပြင်းသူ လူသတ်သမားများ(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြွေထက် အဆိပ်ပြင်းသူ လူသတ်သမားများ(၂)
မြွေထက် အဆိပ်ပြင်းသူ လူသတ်သမားများ(၂)
Posted by winkyawaung on Oct 11, 2010 in Myanma News | 11 comments
ဒီအမှုက တရားခံတွေကို စီရင်ချက်ချပြီးသွားပြီဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အများပြည်သူတွေသိရအောင် ဆက်ပြီးရေးလိုက်ရပါအုံးမည်…။
မကွေးမြို့နယ် တရားရုံး ပြစ်မှုကြီးအမှတ် ၄၄၀၄/ ၂၀၀၉ နံပါတ်နဲ့စီရင်ချက်များကို အသီးသီးချ မှတ်ပြီးကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
(၂၉/၃/၂၀၁၀) နေ့က တရားခံ စိုင်းလေး(ခ)တင်ဝင်း အသက်(၄၅)နှစ် အား ပြစ်မှုပုဒ်မ၊ ပပက ၆ (၁)အရ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒါဏ်(၅) နှစ်ကျခံစေကြောင်းသတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ တရားစွဲဆိုခံထားရသော မနီနီသန်း(ခ)ချိုတီမာ နှင့် မလဲ့ယဉ်ဝင်း တို့အား ပြစ်မှုပုဒ်မ၂၅၃(၁) အရ တရားသေလွတ်စေကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
(၁၀/၈/၂၀၁၀) နေ့က တရားခံ စိုင်းလေး(ခ)တင်ဝင်းအသက်(၄၅)နှစ် ၊ တရားခံ ချစ်ဦး အသက်(၃၁)နှစ်၊ တရားခံ အူစမန် အသက်(၃၂)နှစ် တို့ သုံးဦးကို အမျိုးသားစီးပွားပုဒ်မ ၁၈ အရ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒါဏ် (၇)နှစ် စီကျခံစေရန် ချမှတ် ကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
(၂၃/၉/၂၀၁၀) နေ့က တရားခံ စိုင်လေး (ခ)တင်ဝင်းအသက်(၄၅)နှစ် နှင့် တရားခံ ချစ်ဦး အသက်(၃၁)နှစ် တို့နှစ်ဦးအား ပြစ်မှုပုဒ်မ ၄၆၈ အရ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒါဏ် (၃)နှစ် စီ အသီးသီးချမှတ်သွားကြောင်း မကွေးမြို့နယ်တရားရုံးမှ သတင်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
(၁)တရားခံ စိုင်လေး (ခ) တင်ဝင်း အသက်(၄၅)နှစ်က စုစုပေါင်း(၃)မှုနဲ့ ပြစ်ဒါဏ်ကတော့ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒါဏ်(၁၅)နှစ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
(၂) တရားခံ ချစ်ဦး အသက်(၃၁)နှစ်က စုစုပေါင်း(၂)မှုနဲ့ ပြစ်ဒါဏ်ကတော့ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒါဏ် (၁၀)နှစ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
(၃) တရားခံ အူစမန် အသက်(၃၂)နှစ်က (၁)မှုနဲ့ ပြစ်ဒါဏ်ကတော့ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒါဏ်(၇)နှစ် စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းတို့ကို သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ တရားခံများက သူတို့ရဲ့အမှုတွဲများအား မကွေးခရိုင်တရားရုံးသို့ ဆက်လက်ပြီး အယူခံလွှာတင်သွင်းထားကြောင်းကိုလည်း မြို့နယ်တရားရုံးက သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်..။
ဒီတရားခံများကြောင့် မြွေကိုက်ခံခဲ့ကြရတဲ့ မသိနာမလည်ကြသောအပြစ်မဲ့ တောင်သူလယ်သမား အချို့မှာ အသက်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းတို့အား တောရွာမှ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများက ယနေ့အထိ တသသဖြင့် ပြောကြားနေကြကြောင်းကိုလည်း သတင်းရခဲ့ပါတယ်။
မှတ်ချက်၊ ။ ဤ အမှုအား တစ်နှစ်ကြာအောင်စစ်ဆေးခဲ့ရပါသည်။ တရားခံ၏ တိုက်ကြီး ကိုလည်း သိန်း(၇၀၀ိ)ကျပ်ဖြင့်ရောင်းလိုက်ရကြောင်း၊ ယခု အမှုအား အချိန်အခါမီ အမြန် ပြစ်ဒါဏ်ချလိုက်၏။ ထပ်မံအယူခံဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမှုနှင့် ပတ်သက်ကြသော တာဝန်ရှိသူများကို ရာထူး၊ ဂုဏ်ထူးဆုများအား ချီးမြှင့်ပေး ကြကြောင်း၊ ဤအမှုအား စတင်သတင်းပေးသော တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ဦး ကိုလည်း ဆုတော်ငွေအဖြစ် ငွေ(၁၀၀၀၀ိ) တစ်သောင်းကျပ်တိတိကို (လျှို့ ဝှက်စွာ) တဆင့်/ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးကြောင်း ကြားသိရပါ၏။ (ပူဇာ စ ပူဇာနေယျနံ၊ ဓတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။ )
ဤအမှုစီရင်ချက်အား မည်သည့် သတင်းဂျာနယ်များသို့မျှ ဖော်ပြပေးထားခြင်း မရှိပါ။
မြွေထက် အဆိပ်ပြင်းသူ လူသတ်သမားများ(၃) ကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါအုံးမည်….။
ဤအမှုအား စတင်သတင်းပေးသော တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ဦး ကိုလည်း ဆုတော်ငွေအဖြစ် ငွေ(၁၀၀၀၀ိ) တစ်သောင်းကျပ်တိတိကို (လျှို့ ဝှက်စွာ) တဆင့်/ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးကြောင်း ကြားသိရပါ၏။ ဆိုတာမို့ .. တသောင်းမနည်းလွန်းဘူးလားလို့ ပြောချင်မိတာပါ။
အဲဒီတရားခံတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတခုလောက်တော့ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်မိပါတယ်။
၂၀၀၉ ခု၊ စက်တင်ဘာလက အမှုကို ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာလမှာ အမိန့်စီရင်ချက်ချလို့ ပြီးပါတယ်။
မြွေထက် အဆိပ်ပြင်းသူ(၁) ကို ပြန်ဖတ်ရင်တော့ ရှင်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်..။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်။
(ပူဇာစ ပူဇာနေယျနံ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ) ။အထက်က ပို့စ်မှာ (ဧ-ကို ဓ-ဟု မှားသွားပါသည်။) ပူဇော်ထိုက်သူများကို ပူဇော်ခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတစ်ပါး ဖြစ်၏။ မည်သူတွေက… မည်သူ မည်ဝါများကို ပူဇော်ပသ ကြရမည်ကို စာဖတ်သူများ နားလည်၍ သဘောပေါက်နိုင်ကြပါစေ…..။ (မြန်မာပြည်က အမှုများ နှင့် တရားခွင်…)
တာဝန်သိပြည်သူကိုပေးတဲ့ ဂုဏ်ပြုငွေကလည်းနည်းလိုက်တာ တစ်သောင်းတဲ့ ။ သိန်ဂဏန်းလောက်တော့ပေးရမှာပေါ့.. ။
သူပြောပြလို့လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်တာကို ပေးတဲ့ငွေက မုန့်ဖိုးတောင်မရှိပါလား ။ သူ့ခမျာသတင်းပေးရတယ် စိတ်လည်းပူနေမှာပဲ သွားရှာဖွေတာအတိမ်စောင်းဖြစ်သွားလို့သတင်းပေးသူကို တရားခံဖက်ကသိသွားရင် သူ့မှာလည်း အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်လေ ။ ဒါကို ဂုဏ်ပြုတာက တစ်သောင်းထဲနဲ့လား ။
တရားသူကြီးတွေကို လ္ဘက်ရည်တိုက်တဲ့ဖိုးလောက်တောင်မရှိပါလား ။
ဆုငွေတစ်သောင်းကတော့ နည်းလွန်းပါတယ်။ သူကတာဝန်သိတတ်လို့ သတင်းပေးသာ ဒီထက်ပိုပေးသင့်ပါတယ်။ အမှုကိုတစ်နှစ်တောင်စစ် ရတဲ့ကုန် ကျစရိတ်ရဲ့ တစ်% တောင်မရှိပါဘူးလို့ပြောချင်တာပါ။
အဲဒါတောင် သူများပြောမှာဆိုးလို့ပေးရတာ့ ….. ယူတော့ပြုံးပြုံး ပေးတော့မုန်း တဲ့ ….. တောင်းတောများများ ပေးတော့ နည်းနည်းတဲ့ ….. ရဲနှင့်ပြည်သူ လက်တွဲလို့မရသေးဘူးဗျ …. ညှိမရဘူးဖြစ်နေတယ် … ချိန်ခွင်တစ်ဖတ်စောင်းနေတယ် ….
တာဝန်သိ သတင်းပေးသူက အထက်ကို စာတင်တောင်းဆိုပါတယ်..။ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအကြီးအကဲတစ်ဦးဆီကို သွားရောက်တွေ့ဆုံဘို့ ပြန်စာချပေးပါတယ်။ သွားတွေ့တဲ့အခါ..မင်းတို့က ဘယ်ကကောင်တွေလဲ..။ အသံချဲ့စက်ငှါးပြီး အော်သလိုတော့ဖြစ်သွားပြီ..။မင်း လုံခြုံရေးအတွက်ငါတို့က လျှို့ဝှက်ထားရတာကွ.. ဟုဆိုကြောင်း၊ သတင်းပေးသူက ရင်ဖွင့်ပါသည်။